Nin isaga oo xabsi ku jira bangi ka dhacay 1 malyan oo doolar – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Nin isaga oo xabsi ku jira bangi ka dhacay 1 malyan oo doolar
Allhadaaftimo November 20, 2019 Uncategorized
Nin musuqmaasuq Internet xabsi looga xukumay ayaa la dhigay xabsi ku yaalla dalka Nigeria kaddib marki lagu eedeeyey inuu dhacay lacag ka badan 1 malyan oo doolar.
Saraakiisha ka hortagga musuqa waxay sheegeen Hope Olusegun inuu dhaca uu u adeegsaday khadka Interneetka.
Waxaana ninkaasi la xiray 2012-ki isaga oo ay maxkamad ku xukuntay 24 sano oo xarig ah xabsigaasi oo ah kan ugu dheer oo dambiile lagu xukumo dalka Naigeria.
Baaritaan kale oo ninkaasi lagu sameeyey ayaa lagu ogaaday inuu weli ninkaasi helo adeegga internetka.
Warmurtiyeed ninkan ku saabsan oo ay Talaadadi soo saartay wakaaladda u qaabilsan dambiyada dhaqaalaha iyo maaliyadda ee Nigeria (EFCC) waxay sheegtay iney baaritaankooda ku ogaadeen Aroke oo ku jira xabsiga Legos sida uu weli uu u sii wado falalka
EFCC waxay sheegtay wixi ka dambeeyey marki ninkaasi la xiray 2012-kii in la ogaaday arday wax ka barata Malaysia iney yihiin kuwa dambiyada xagga internetka ee labada qaaradood isaga gudbiya.
EFCC waxay toddobaadkan sheegtay baaritaanka hordhaca ee ay sameeyeen, ay ku ogaadeen in Aroke loo fududeeyey inuu helo adeeg internet iyo taleefankiisa gacanta.
Wuxuuna maxbuuskaasi mudda kooban la dhigay dhakhtar Legos ku yaalla “xanuunkiisa oo aan la ogeyn” wuxuuna fursad u helay inuu adeeg dhammeystiran uu helo, wuxuuna la kulmay xaaskiisa iyo carruurtiisam, dhaqdhaqaaqyada arrimaha bulshada si weyn ayuu uga dhex muuqda.
Wuxuuna nikaasi adeegsanayey magaca Akinwunmi Sorinmade magacaasoo ah mid been ah wuxuuna magacaasi ku furtay akaawun bangi wuxuuna iibsaday guri iyo gaari qaali ah inta uu xabsiga ku jiray, ayey tiri warbixinta EFCCC.
Inta uu bangiga uu ku jirayna lacagaha uu maamulo ee uu diro ama loo soo diro wuxuu uu adeegsanayey akaawun ay xaaskiisa ay lahayd.
Saraakiisha u qaabilsan la dagaallanka musuqmaasuqa waxay sheegeen iney hadda baaritaan ku wadaan sababta maxbuuskaasi loo geeyey Isbitaal iyo sababaha keenay inuu huteellada iyo goobaha kale uu booqdo isaga oo maxbuus ah.
Kiiskan oo laga cabsi qabo inuu lugaha la galo mas’uuliyiin musuq ku dhaqaaqay
Kiiskan ayaa ah mid si weyn uga yaabisay shacabka Nigeria: waxayna isweydiinayaan sababta keentay nin ku jira xabsi ka mid ah xabsiyada dalka Nigeria ammaankiisa aadka loo adkeeyo inta uu maxbuus uu ka soo baxo oo uu si xor ah uu ugu dhaqdhaqaaqo.
Dadka qaar ayaa aaminsan Aroke iney arrimahaasi oo dhan u suuragasheen haddii uu garab buuxda ka helin saraakiisha xabsiga uu ku jiro ugu sarreeya.
Illaa iyo hadda ma jirto cid shaqada looga joojiyey oo uu saameysay kiiska Aroke.
Waxaana sida oo kale weli caddeyn wakaaladda maamusha xabsiyada dalkaasi iney qorsheynayaan iney beddelaan ilaalada iyo mas’uuliyiinta xabsigaasi iyo su’aalo kale ayey shacabka dalka Nigeria isweydiinayaan haddiiba ay maxabiista hantida leh, siyaasiyiinta iyo shaqsiyaadka caanka ah iyagaoo xabsi ku jira haddana ay jilayaan noolashooda caadiga ah oo ay jirin wax xaddideyso.
Previous Dagaal Dhexmaray Ciidamo Ka wada Tirsan Dowladda Federaalka ah
Next Akhriso: Qodobbada Ay Farmaajo Kula Heshiiyeen Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh